Xildhibaanada Golaha Guurtida Somaliland Oo Kalfadhi Ay Iskugu Yimaadeen Ku Kala Kacay ka Doodida Xeerka Ka Hor Taga Xaalufinta Deegaanka Iyo Soo Celinta Seerayaasha |
Xildhibaanada Golaha Guurtida Somaliland Oo Kalfadhi Ay Iskugu Yimaadeen Ku Kala Kacay ka Doodida Xeerka Ka Hor Taga Xaalufinta Deegaanka Iyo Soo Celinta Seerayaasha
Hargeysa(GNN)-Mudanayaasha golaha guurtida Somaliland oo manta kalfadhi iskugu yimi ayaa waxay ka doodeen xeerka ka hortaga xaalufinta deegaanka iyo soo celinta seerayaasha, iyo ku wacyi galinta tamarta dabiiciga ah .
Waxaana kooramkan oo ay kasoo xadireen badiba xildhibaanada guurtidu ayaa waxa gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan.
Waxaana xildhibaanadu ay kaga doodeen xeerarkan iyaga o markii ay ka doodida xeerkani xoogaa socday ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaadeen ansixinta xeerkan,waxaana markiiba meesha ka dhashay buuq iyo sawaxan.
Gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland ayaa markiiba ku dhawaaqay inuu kalfadhigu xidhan yahay isla markaana dib layskugu soo noqon doono.
Xeerka ka hortaga xaalufinta deegaanka iyo soo celinta seerayaasha ayaa isagu muddo hor yaalah golaha iyaga oo xildhibaanada qaar soo jeediyeen in dadku ka waantoobaan gubista dhirta qoyan isla markaana ay isticmaalaan tamarta dibiiciga ah.